Minisitra Augustin Andriamananoro : Manao propagandin’i Andry Rajoelina -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisitra Augustin Andriamananoro : Manao propagandin’i Andry Rajoelina
26/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy takona hafenina. Izay no azo ilazana ny fomban’ny olon’ny Mapar sy ny TGV miaraka amin’i Andry Rajoelina ankehitriny. Efa tratran’izy ireo mantsy ny tanjona niriany, izay nanaovany hetsika tetsy amin’ny Parvis-ny Lapan’ny Tanàna tamin’iny volana mey lasa teo iny, ho amin’ny fahazoan-tseza eo amin’ny Fitondrana. Porofon’izany, ny praiminisitra Ntsay Christian dia avy amin’i Andry Rajoelina. Toraka izany koa ireo avy amin’ny Mapar sy TGV, toa ny minisitry ny Jono, Augustin Andriamananoro, sy ny minisitry ny Mponina, Naharimamy Irmah, ny minisitry ny Fananan-tany, Christine Razanamahasoa…
Amin’izao ankatoky ny fifidianana izao, efa miroso amin’ny fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana ireo kandidà. Ho an’ingahy Andry Rajoelina manokana, efa mandeha ny fitetezam-paritra ataony eto an-toerana hatrany ivelany. Saingy, tsy izy tenany irery ihany anefa no manao ny propagandiny ho amin’ny fifidianana Filoham-pirenena 2018, fa manampy azy, ary miaraka manatanteraka izany ireo olom-panjakana sasantsasany.
Porofo mitohoka amin’ny tenda, ary tsy azo nafenina ny nataon’ny minisitra Augustin Andriamananoro tamin’iny herinandro lasa teo iny. Ity olom-panjakana, mpikambana eo anivon’ny governemanta ity mihitsy no mirotsaka an-tsehatra amin’ny propagandin’ingahy Andry Rajoelina tany Soamahamanina. Tamin’ny alalan’ny fitokanana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena no nanatanterahany sy nanentanany an-kolaka ny mponin’i Soamahamanina handrotsa-bato ho an’i Andry Rajoelina. Araka ny tsilian-tsofina mantsy, vola avy amin’ity filoha nasionalin’ny antoko TGV/Mapar ity no vola nanatanterahana io fananganana sy fanamboarana kianja ao Soamahamanina io.
Mampametra-panontaniana ihany ankehitriny ny amin’ny fahazoan’ny olom-panjakana manao propagandin’ny olona tohanany. Araka ny didy navoakan’ny HCC Lah.18-HCC /D3, ny 25 mey 2018, ny governemantan’ny marimaritra iraisana dia miantoka ny tsy fiandanian’ny mpitantan-draharaham-panjakana mandritra ny fanomanana ny fifidianana… Ankehitriny anefa, tsy nohajain-dry Andry Rajoelina sy ny ekipany mpikambana eo anivon’ny governemanta izany, fa dia samy manao izay tiany atao ireo olom-panjakana mpanara-dia ny filoha mpitarika azy ireo. Tafiditra amin’izany koa ireo solombavambahoaka, toa an-dry Naivo Raholdina, voafidy tao amin’ny boriborintany fahadimy, sns.
Etsy andaniny, toa manome vahana, ary miandany tanteraka ihany koa, ary toa manampy tosika azy ireo handika io fanapahana navoakany io ny filohan’ny HCC, Jean-Eric Rakotoarisoa. Maro ihany koa anefa no manambara fa tsy mamoaka didy araka ny lalàna ny HCC, fa didy sy fanapahana politika.
Fandikan-dalàna tsotra izao ny an’i Andry Rajoelina sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta mpanohana azy, ary dia mitazam-potsiny ny HCC.